Daawo: Xildhibaanada Hawiye oo farriin kasoo diray Shiirkole - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Xildhibaanada Hawiye oo farriin kasoo diray Shiirkole
Daawo: Xildhibaanada Hawiye oo farriin kasoo diray Shiirkole
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo ka soo jeeda Beelaha Hawiye, oo galabta gaaray xaafadda Shiirkole ee degmada Hodan oo maalmahan ay xiisad colaadeed ka taagan tahay, ayaa halkaas ku qabtay shir jaraa’id oo xasaasi ah.
Qaar ka tirsan Xildhibaanada booqashada ku tagay Shiirkole oo la hadlay Saxaafadda ayaa sheegay inay garab taagan yihiin General Saadaq Joon oo saldhig Ciidan ka sameystay Xaafadaas kadib markii uu ka war helin weerar ay kusoo qaadi rabto Dowladda.
Senator Yuusuf Dhagey oo kamid ahaa Xldihibaanadii tagay Shiirkole ayaa sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo dadka deegaanka oo uu sheegay inay muujiyeen geesinimo, islamarkaana ay is-hortaageen gardarradii dowladda.
Senator Dhagey ayaa sidoo kale sheegay in dalkaan laga keenay meel fog islamarkaasna aysan shaqeyn karin waqtigaan in dib loogu celiyo, oo aysan aqbali doonin.
Wuxuu wax laga xumaado ku tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay weerar kusoo qaado cid kasta oo ka ra’yi duwanaata, wuxuuna Dowladda Soomaaliya iyo madaxda Maamul Goboleedyada ugu baaqay inay dib ugu laabtaan Teendhada Afisyooni.
“Shiirkole waa meeshii markii ugu horeysay kacdoonka looga bilaabay kacaankii Siyaad Barre, waxay caan ku tahay in howl kasta oo laga bilaabo ay guul ku dhamaato,” ayuu yiri Dhagey.
“Waxaan soo marnay qeybo badan oo kamid ah magaalada, waxaana aragnay dhufeyso badan oo ay ku sugan yihiin ciidamo diyaara u ah inay soo celiyaan dimoqraadiyada,” ayuu sii raaciyey Dhagey.
Xildhibaan Cabdullaahi Axmed Nuur oo kamid ahaa Xildhibaanadii booqday Shiirkole ayaa isna sheegay inuu Shacabka deegaankaas uga mahad-celinayo inay iska difaaceyn weerarkii gardarada ahaa ee lagu soo qaaday, wuxuuna Dowladda Soomaaliya ku eedeeyey inaysan laheyn wax naxariis ah.
Sidoo kale Cabdullaahi Axmed Nuur ayaa sheegay in Saadaq Joon uusan gelin wax dambi ah, islamarkaana uu kaliya dowladda u sheegay inay doorasho qabato, wuxuuna tilmaamay in wixii hadda ka dambeeyo Madaxweyne Farmaajo ay u aqoonsan yihiin hoggamiye kooxeed.
“Farmaajo isagaa ugu tabar yar dadka isagaana dagaal hurinaya,” ayuu yiri Xildhibaan Cabdullaahi.
Dhinaca kale Senator Cabdi Ahmed Dhuxulow Dhegdheer oo kamid ahaa Xildhibaanadii tagay Shiirkole ayaa isna Sheegay in Dowladda Soomaaliya ay ku tumatay Dastuurka isla markaasna aysan diyaar u aheyn inay dalka ka qabato doorasho xalaal ah.
“Waan ku gumeysanaa ama saraha dhaadheer ayaan kaa duminaa kuuma suurta galeyso Farmaajoow, dadkaanna gumeysi aqbali maayaan,” ayuu yiri Xildhibaan Dhagdheer ayaa sidaan yiri.
Hoos ka daawo shirka jaraa’id.